Liiska ICO ee ugu Fiican 2021 | Liiska Sare ee Digniinta ICOs iyo Faallooyinka | Adeegga Liiska ICO
Ku biir Bertinity ICO
Liistada ICO ee khadka tooska ah - Lambarka 1 Mashruuca Liiska ICO ee 2021
Liistada ICO Online waa mid ka mid ah websaydyada liisaska ICO ee ugu wanaagsan 2021 kuwaas oo si joogto ah u cusbooneysiiya ICO -yada ugu wanaagsan ee la maal -gashado SUBMIT ICO badhanka hoos ku qoran:
Kuwa ugu Fiican ee ICO ee Maalgelinta 2021 - Liiska Sare ee ICO 2021
ICO-yada ugu sareeya
ICO -yada ka hor
ICO-yada soo socda
Dhamee ICO -yada
Solidus Technologies waxaa lagu aasaasay 2017 oo ah hay'ad macdan qodista Ethereum waxayna hadda bilaabaysaa Solidus Ai Tech. Solidus waxay soo gabagabaynaysaa dhismaha gudaha ee Eco Friendly High Performance Computing (HPC) Xogta Xarunta & Kaabayaasha-Adeegga Adeegga (IaaS) halkaas oo Masuuliyiinta Dawladda, Megacorps, SMEs & Xirfadlayaashu ay awood u yeelan doonaan inay iibsadaan adeegyada sirdoonka macmalka ah iyagoo isticmaalaya Caalamka ugu horreeya ee utility token (AITECH). November 18, 2021 April 30, 2022 9.9
Dadka haysta Lacagta Dakhliga (RVC) waxay maalgeliyaan shirkado tiknoolajiyad sare leh si kor loogu qaado suuqgeynta, iibinta, iyo hawlaha bulshada. Bilowga helaya maaliyaddu waxay u qoondeeyaan ilaa 10% dakhliyada si nidaamsan RVC looga iibsado suuqa, yaraynta sahayda iyo kordhinta qiimaynta. October 15, 2021 December 5, 2021 9.8
BERTINITY waa hal -abuur carqaladeeya oo si buuxda u qarsoon oo No KYC ecosystem blockchain ecosystem. Hab -dhismeedka deegaanka BERTINITY wuxuu ka kooban yahay 5 qaybood oo waaweyn, oo ay ku jiraan albaabka lacag -bixinta crypto, is -weydaarsiga dhexe, furaha ICO, suuq -geynta sumadda amniga adduunka oo dhan baahsan & qadaadiic hooyo. October 20, 2021 January 17, 2022 9.2
Unigrid waxay siin doontaa aduunka shabakad caalami ah oo dimuqraadi ah oo leh kaydin iyo adeegyo aan badnayn. Shabakad ay maamulaan dadku, dadka. Si wada jir ah, waxaan u soo afjari karnaa waqtiyada aan la qorsheyn oo aan ka dhigi karnaa wax la soo dhaafay! November 1, 2021 December 31, 2021 9.7
Quarashi wuxuu awood u siinayaa awood -qeybsigii ugu horreeyay oo dhan hal madal oo diiradda lagu saaray: Wada -sheekaysiga Qarsoodiga, Is -weydaarsiga Baahsan, IDO Launchpad, Blockchain Interfaced Multi Crypto boorsada. October 1, 2021 December 31, 2021 9.9
RastaSwap waa mashruuc ay bulshadu wadato. waxaa loo sameeyay inay noqoto #1 Crypto Cannabis Ecosystem iyo buundada u dhaxaysa suuqa saamiyada dhaqameed iyo crypto. December 21, 2021 March 1, 2021 9.4
NEURONET.Exchange waa beddelaad baahsan oo gaar ah oo leh barkad macdanta iyo adeegga lacag bixinta. NEURONET.Exchange waa xog isweydaarsi ku salaysan sirdoon. October 15, 2021 January 31, 2021 9.4
Pawā waa qalab loogu talagalay mulkiilayaasha qalabka macdanta kaas oo kuu ogolaanaya inaad ku badbaadiso macdanta bitcoin - mustaqbalka waxay noqon doontaa qayb weyn oo ka mid ah HashEX iyo borotokoolka saamiga BeMine. November 8, 2021 January 31, 2022 9.5
Veritise waxay bixisaa xaqiijin, aqoonsi, ururinta xogta iyo adeegyada falanqaynta ee shirkadaha iyo shaqsiyaadka. Bartamaha shaqooyinkan ayaa ah Veritise Enterprise-grade blockchain oo ah awoodda ay u leedahay inay u gudbiso oo u kaydiso xogta si ammaan ah oo aan la beddeli karin. September 3, 2021 December 31, 2021 9.8
Ownex (o iska leh) waa calaamad baahsan oo loo yaqaan 'crypto token' kaas oo lagu dhisay blockchain Binance. 500-ka sare ee mulkiilayaasha calaamaduhu waxay ka heli doonaan saamiyo faa'iido leh 60% faa'iidada ownex.io, oo loo qaybiyo si waafaqsan dhibcahooda. October 17, 2021 April 30, 2022 9
Dhabicoin waa qayb ka mid ah hantida dhijitaalka ah si loogu mideeyo shabakado badan hal nidaam deegaan oo dhijitaal ah kaas oo u oggolaan doona adeegsadayaasha inay la xiriiraan, wax bartaan, lacag bixiyaan, oo ay qabtaan hawlo kale duwan oo kala duwan. Ujeeddadiisu waa in kor loo qaado dhaqaalaha Imaaraadka iyo in la beddelo suuqyada caalamka. September 24, 2021 October 25, 2021 9.6
Bamonyo waa cryptocurrency mashruuca silsiladda huteel waara oo ka kooban guryo yar yar oo xariif ah: Tiny Hotels. Calaamada utility Bamonyo waxay noqon doontaa habka kaliya ee lagu heli karo dhammaan adeegyada 10,000 huteel ee aan qorsheyneyno inaan dhisno laga bilaabo 2022. November 1, 2021 December 31, 2022 9.6
Platform Kasbashada Dhinacyada badan
Waxaan horumarineynaa ciyaarta si aan u kasbano (p2e) ciyaaraha crypto ee shabakada polygon (matic). waxaan bilownay suuqgeyn nft ah oo aan u dhignay matic sida loo qorsheeyey. November 24, 2021 December 8, 2021 9.2
AQOONTA KIND waxaa loogu talagalay in lagu simo iibsashada iyo iibinta dheemanka onlaynka ah. Tani waa calaamad taariikheed! Ujeedada loo abuurayo calaamadahan ayaa ah in dheemanka kohinoor uusan ahayn kaliya gabal adduunka. Dhab ahaantii, waxaa jira qaar badan oo iyaga ka mid ah oo ku jira qaabkii calaamadihii adduunka. Dhammaan dadkana waxay ku haysan karaan wax badan oo dheemankan qaaliga ah boorsadooda. October 20, 2021 December 5, 2021 9.4
Dunideena waxa ku shaqeeya balaayiin qalab casri ah kuwaas oo soo saara wax kala iibsi cajiib ah oo aan kumanana ama malaayiin ahayn balse maalin kasta wax kala iibsi aan la tirin karin . Dhacdadan waxaa loogu yeeraa digilite ka abuurista marin bilaash ah oo ka yimid adduunka dhabta ah ilaa adduunka crypto ixtiraamka qarsoodiga. November 4, 2021 February 4, 2022 7.5
Nidaamka deegaanka ee loo yaqaan 'Crypto Stake eco system' waa madal khamaarka baahsan oo siinaya ciyaartoyga aduunka oo dhan fursad ay ku shubtaan ciyaaraha isboortiga, dhacdooyinka buugaagta ee gees kasta oo adduunka ah. Waxaan aaminsanahay in dadku ay awoodaan inay ku dhejiyaan khamaarka iyagoo isticmaalaya lacagaha crypto iyada oo aan la xaddidin waxa ay dooran karaan inay ku sharmaan. September 20, 2021 January 31, 2022 9.8
Coinjoss waxay ujeeddadeedu tahay inay siiso adeegsadayaasha khibrad aan kala go 'lahayn oo ay ku maareeyaan cryptocurrencies -kooda. Coinjoss waa nidaam deegaan oo dhan oo ka bilaabma madal isweydaarsi deg -deg ah, oo diiradda saaraya fududeynta adeegsiga is -dhexgalka ee adeegsadayaasha si ay ugu ganacsadaan cryptocurrencies -kooda iyagoo leh heerka ugu wanaagsan ee suuqa. October 15, 2021 November 30, 2021 9.6
Nidaamka deegaanka ee GHA wuxuu ku daraa beero sax ah, khariidad dhul beereed, dareemayaasha IoT, nidaamyada beerashada toosan, sirdoonka goobta, software maamulka dalagga, iyo tignoolajiyada kale ee beeraha leh qaybsan tignoolajiyada ledgerka (DLT) iyo blockchain beerashada beeraha. Waxaan leenahay awood gaar ah si aan u wanaajino hufnaanta, hufnaanta, iyo kalsoonida inta lagu jiro silsiladda saadka hemp-beeraha. October 26, 2021 December 9, 2021 9.7
Financio waa is -weydaarsi baahsan oo ku socda Binance Smart Chain, oo leh astaamo badan oo kuu oggolaan doona inaad kasbato abaalmarin sare oo crypto -dhaaf ah. September 15, 2021 October 30, 2021 9.5
Mashruuc maaliyadeed baahsan (dad badan), oo sii deynaya tabarucayaasha maalgashadayaasha ee mashruuc la maalgeliyey ee lacagaha horay loo sii diyaariyey ee dhammaystirka Milestone. July 24, 2021 October 31, 2021 9.1
Epsilon waa mid bulshadu wadato, nabadgelyo guud, iyo mashiinka raadinta furan. Epsilon waxay leedahay jeebkeeda baahsan iyo is -weydaarsiga baahsan. Waxay ku socotaa madal Binance Smart Chain waana astaanta BEP-20. September 4, 2021 December 13, 2021 9.5
Abaalmarinta Nexxus waxay bixisaa xal suuq -geyn iskaashi oo u gaar ah bulshada kaas oo kor u qaada bulshada oo dhan. Waxay ka caawisaa hay'adaha samafalka ee maxalliga ah iyo ururrada aan macaash doonka ahayn inay ku maalgeliyaan sababaha bulsheed ee muhiimka ah iyada oo la adeegsanayo tabarucaad joogto ah oo leveraged ah oo ku shubta lacag caddaan ah akoonkooda bangiga toddobaad kasta kuwa wax iibsada ee dukaamaysiga wata. January 16, 2020 January 22, 2020 7.8
2local waxaa ka go'an hal-abuurnimo iyo ganacsi waara oo leh daryeelka deegaanka iyo cimilada, shaqo cadaalad ah, iyo kobaca dhaqaalaha. Tan, 2local waxay rabtaa inay gacan ka geysato iskaashi cusub oo caalami ah oo lagama maarmaan u ah in lagu gaaro ujeedooyinka UN. Intaas waxaa sii dheer, ficilku wuxuu u baahan yahay qof walba! October 17, 2019 December 31, 2019 9.9
Encores waxay ku dhowdahay inay bedesho maskaxda hal-marin-dakhli-dejin iyo dib-u-qaybsiga faa'iidooyinka dadka isticmaala iyadoo lagu abaalmarinayo marinka internetka ama qabashada hawlo kale oo fudud, sida isku xirka bulshada, xayeysiinta, iwm. October 1, 2019 Waxaa laga yaabaa 31, 2019 7.5
Isbarashada Robinhood. Ku soo celinta kalsoonida khamaarka. September 14, 2019 February 2, 2020 8.9
Isweydaarsiga Flas waa madal ganacsi oo dhammaystiran oo bixiya noocyo kala duwan oo hanti dijitaal ah. Maaddaama shirkad ganacsi oo ammaan ah, la isku halleyn karo oo horumarsan ay ka sameysay meherad ganacsi oo loogu talagalay ganacsiga xirfadleyda ah, Flas Exchange waxay horumarin doontaa nooc ka mid ah astaamaha horumarsan si loo buuxiyo shuruudaha gaarka ah iyo kuwa adag ee xirfadlayaasha iyo hay'adaha. November 8, 2019 February 9, 2020 8.3
GRAYLL waa Ledger Technology Ledger Technology, AI iyo Barashada Mashiinka ayaa lagu dabaqay nidaamka maaliyadeed ee algorithmic kaas oo abuuraya faa'iidooyin baaxad leh si otomaatig ah, oo lagu heli karo adeegsadaha fudud ee moobiilka & websaydhka. Waxaan diiradda saareynaa hantida dhijitaalka ah iyo suuqyada hantida ee la tokenay. Nidaamyada waxaa lagu dabaqi karaa wax kasta, tusaale ahaan badeecadaha, farshaxanka, hantida maguurtada ah, cabbiraadaha cimilada, xogta isbeddelka warbaahinta bulshada iyo wixii la mid ah. July 1, 2019 February 17, 2020 9.1
HiveNet waxay bixin doontaa xalka teknolojiyadda si looga faa'iidaysto waqtiyada kombiyuutarka ee bilaa camalka ah iyadoo la dhisayo shabakad xisaabinta daruuraha oo la qaybiyey. Tani waxay u saamaxaysaa milkiilayaasha kombiyuutarka inay macaash ka helaan waqtiyada shaqo la’aanta ah ee kombiyuutarradooda September 24, 2019 November 23, 2019 7.9
Mindsync waa madal iyo beel caalami ah oo soosaarayaasha barashada mashiinka, saynisyahannada xogta iyo khuburada AI ee la dabaqay. Bulshadani waxay awood u yeelan doontaa inay wadashaqayso iyo sidoo kale ka qaybgasho tartamada u dhexeeya shakhsiyaadka iyo kooxaha si loo xaliyo dhibaatooyin kala duwan. March 1, 2019 April 30, 2021 10.8
Pawtocol LLC, oo ah shirkad mas'uuliyad xaddidan oo Delaware ah (“Pawtocol”, “annaga”, “annaga”, “annaga”) ayaa ujeeddadeedu tahay in warshadaha daryeelka xayawaanka la geliyo da’da xannibaadda iyadoo la hormarinayo barxad leh dhaqaalaha diiradda saaraya xayawaanka iyo deegaanka. Warqadani waxay sharraxaysaa aragtideena iyo falsafadeena ka dambaysa Pawtocol iyo sababta aan mashruucan suuqa ugu gaynayno, iyo sidoo kale horumarkayaga ilaa maanta iyo sababta aan u nahay kooxda ku habboon ee fulin karta. July 1, 2018 December 31, 2018 7.9
SynchroBit ™ waa mid ka mid ah mashaariicda ugu waaweyn ee moodeelka maaliyadeed ee nidaamka deegaanka SynchroSphere®, kaas oo lafdhabarta dhaqaalaha siiya mashaariicda kale iyo modules -ka deegaanka. Madalku wuxuu si buuxda ula midoobi doonaa aaladaha kale ee maaliyadeed ee SynchroSphere® si loo abuuro waayo -aragnimo macmiil oo aan kala go 'lahayn isla markaana loo siinayo adeegsadayaasha jawi ganacsi oo wax soo saar leh, sax ah, aamin ah oo ku saleysan tikniyoolajiyadda xannibaadda iyo cryptocurrencies. August 1, 2019 December 28, 2019 8.2
TecraCoin wuxuu qorsheynayaa horumarinta Tecra Investments mustaqbalka. TecraCoin waxay xaq u leedahay inay bedesho qorshayaashan ama ay iska ilaaliso inay ku fuliso go'aankeeda kaligiis. January 17, 2019 January 16, 2020 7.2
Mashruuca CoinCasso waa xal dhammaystiran oo dimuqraadi ah oo loo abuuray dadka. Aragtidayadu gebi ahaanba way ka duwan tahay sababtoo ah waxaan rabnaa in bulshadu awood u yeelato inay go'aan ka gaadho oo saamayn ku yeelato horumarinta sarrifkayaga iyo warshadaha oo dhan. Taasi waa sababta aan u siinno isticmaaleyaasheena fursad ay ku noqdaan milkiilayaasha mashruuca CoinCasso. October 21, 2018 December 31, 2019 8.2
Mashruuca Karuschain wuxuu ujeedkiisu yahay inuu taabto qaar badan oo ka mid ah waxyaabaha muhiimka ah iyo wax soo saarka silsiladda bixinta biraha qaaliga ah ee hadda jira. Mashruuca Karuschain ayaa loo diyaarinayaa si uu si gaar ah u yareeyo arrimaha iyo caqabadaha hortaagan dhammaan ka qaybgalayaasha silsiladda sahayda biraha ee qaaliga ah. January 14, 2020 February 14, 2020 7.2
Heerka01 waa Iskuduwaha 1aad ee Dunida ee Peer (P2P) Isweydaarsiga Sirdoonka Farsamaysan (AI) Teknolojiyadda Is -waafajinta Ganacsiga iyo Dejinta Blockchain. Heerka01 wuxuu xoojiyaa xannibaadda iyo tikniyoolajiyadda cryptocurrency, si loo abuuro isdhaafsiyo (ikhtiyaarro) isweydaarsiga & madal ganacsi halkaas oo ganacsiga maaliyadeed ee forex, saamiyada, badeecadaha iyo cryptocurrencies lagu qaban karo saldhig u dhigma, iyadoo aan loo baahnayn dillaal dhexe. July 1, 2018 December 31, 2018 9.1
SaTT waa calaamad adeegsi oo ku saleysan tikniyoolajiyadda xannibaadda oo u oggolaanaysa is -weydaarsiga xayeysiiska iyo bixinta dhagaystayaasha. SaTT waxaa nidaamiya Qandaraas Smart ah kaas oo ku taxan dalabyada xayeysiinta oo leh dhammaan xogta si ammaan ah loogu hayo xannibaadda Ethereum. Qandaraaska Casriga ahi wuxuu dejiyaa shuruudaha ka -qaybgalka ololaha, wuxuu qiyaasaa guusha, wuxuuna dammaanad -qaadayaa dib -u -tirinta ugu dambaysa. Waxaa laga yaabaa 1, 2018 December 31, 2020 8.3
Gath3r wuxuu qaataa hab cusub oo macdanta-biraawsarka iyadoo la soo bandhigayo qadaadiic asal ah oo isku dhafan oo ay weheliso macdan qodis. Lacagta GTH waxay si fiican ula shaqaysaa daalacashada iyo barnaamijyada labadaba, mana laha arrimo UI, sidaas darteed waxay u oggolaanaysaa qadaadiicda cusub iyo kuwa hadda jira inay adeegsadaan hashrate -ka Gath3r. January 9, 2020 January 11, 2020 6.3
Xalka Bethereum wuxuu ka faa'iideysanayaa tikniyoolajiyadda Blockchain si loo hubiyo khibradda sharadka ugu ammaansan uguna hufan. Ma jiro dhex -dhexaadin ku lug leh: Ciyaartoydu waxay abuuraan sharadka, waxay dejiyaan xeerarka, waxayna bixiyaan hufnaanta dhammaystirka bixinta. Qandaraasyada Smart waxay ilaaliyaan lacagaha waxayna si otomaatig ah u qaybiyaan guulaha ku saleysan shuruudaha sharadka iyo natiijooyinka. October 1, 2018 December 31, 2018 8.4
IBNIF CINEMADROM - Kani waa Shabakadda Caalamiga ah ee Blockchain ee Cinwaaniyeyaasha Madaxa -bannaan, oo lagu dhisay teknolojiyad cusub, iyo mabaadi'da maaliyadeed ee is -dhexgalka u dhexeeya dhammaan ka -qaybgalayaasha soo -saarka filimada, qorayaasha, soosaarayaasha, khabiirada, maalgashadayaasha iyo daawadayaasha. Udub dhexaadkeeda, IBNIF CINEMADROM wuxuu adeegsadaa farsamada xannibaadda February 3, 2020 April 30, 2020 6.9
MyTVchain waa goobtii ugu horreysay ee TV -ga webka ee u heellan naadiyada isboortiga iyo cayaartoyda, waxayna hadda ku dhawaaqeysaa furitaanka kanaalka TV -ga Sport En France, telefishanka Dhaqdhaqaaqa Ciyaaraha. Kanaalkaan waxaa lagu bilaabay hindisaha Guddiga Qaranka Olombikada iyo Ciyaaraha Qaranka Faransiiska (CNOSF), waxaana loogu talagalay horumarinta dhammaan edbinta, dhammaan xiriirada iyo naadiyadooda. February 29, 2020 March 27, 2020 6.1
BILLCRYPT pl waa nidaam isdhexgal baahsan oo caalami ah oo loogu talagalay xafiisyada Wakiilka Blockchain (BR). Hal kaabayaal oo dhinacyo badan leh oo mideeya xafiisyada Wakiilka Blockchain oo ah qaab codsiyo baahsan oo ku saabsan xannibaadda (DApp). Meel u gaar ah oo isku daraysa dhammaan faa'iidooyinka adduunka dhabta ah iyo booska dalwaddu, Internetka la yaqaan iyo xannibaadda. July 3, 2019 April 23, 2020 7.4
Ma doonaysaa inaad sidoo kale taxdo ICO-gaaga?
Liis garee ICO-gaaga maanta boggayaga internetka oo gaadhno kumanaan maalgashadayaasha ah oo ka kala yimid adduunka oo dhan. Hubi xirmooyinkayada liiska iyo dalacsiinta adiga oo gujinaya GUDUB ICO Badhanka.
Waa maxay Liistada ICO ee khadka tooska ah?
Liistada ICO ee khadka tooska ah waa bulshada ugu ballaaran ee dadku u yimaadaan inay taxaan ICO-yadooda Tan iyo 2018, waxaan cusbooneysiineynaa macluumaadka ku saabsan ICO-yada ugu dambeeya ee suuqa laga heli karo. Waxaa jira degmooyin badan oo liis garayn ah oo ah ICO oo laga heli karo internetka laakiin dhammaantood ma ahan kuwo aamin ah oo lagu kalsoonaan karo in la maalgaliyo maaddaama badankood aan si joogto ah loo cusbooneysiin.
Maalgashadayaasha xiisaynaya inay maalgashadaan ICO-yada. Waxay ka hubin karaan qiimeynta ICO-yada shabakadeena ka dibna maalgashi karaan maadaama ay ka caawin doonto inay raadiyaan ugu Firfircoon, Kahor & ICO-yada soo socda.
Waa maxay ICO?
ICO, ama Bixinta Lacagta Bilowga ah, oo mararka qaar sidoo kale loo yaqaan "calaamadda iibka" ama "bixinta calaamadda ugu horreysa", waa dhaqan ah ku soo aruurinta mashaariicda xannibaadda, halkaasoo cryptocurrency ama calaamadda la siiyo maalgashadayaasha hore, ka hor intaan lagu qorin suuqa ballaaran. , sida isdhaafsiga.
Waxaa lagula talinayaa inaad sameyso cilmi baaris ballaaran oo ku saabsan mashruuca ka hor maalgashiga. Tan waxaa ka mid ah akhrinta warqadda cad, ka shaqeynta in ICO ay bixiso qiime-dhab ah iyo in si qoto dheer loo baaro kooxda.
Waa tan sida aad uga qaybqaadan karto ICO:
Lahaanshaha lacagta loo yaqaan 'cryptocurrency' ee ay ICO u aqbasho maalgashi ahaan.
Hubso in boorsada cryptocurrency ay la jaan qaadi karto calaamadda ICO.
Triple ka hubi cinwaanka deebaajiga ilaha rasmiga ah.
Waa maxay ICO Soft Cap?
ICO waxay gaartey hadafkeedii markii daboolkeedii jilicsanaa la gaaro. Daboolka jilicsan ayaa ah qaddarka ugu yar ee looga baahan yahay mashruuca inuu horay ugu socdo.
Waa maxay ICO Hard Cap?
Inta badan ICOs sidoo kale waxay yeelan doonaan dabool adag, taas oo ah xaddiga ugu badan ee ay aqbali doonaan maalgashiga. Haddii ICO ay ku guuldareysato inay gaarto daboolkeeda jilicsan, ICO-yada badankood waxay lacagaha dib ugu celinayaan maalgashadayaasha.
Waa maxay Calaamadaha ICO?
Tokens waxaa lagu qeexi karaa inay tahay hantida loo yaqaan 'crypto hantida' ee la siiyo shirkad maalgelisa mashruuc iyada oo loo marayo ICOs, taas oo noqon karta aalad lacag bixin (unug lacageed) kaliya nidaamka deegaanka ee mashruuca kaas oo bixiya astaamo la mid ah lacagta shilimaadka, laakiin milkiilahooda ayaa sidoo kale leh xuquuq kale shabakadda , sida xaqa codbixinta, xuquuqda saami qaybsiga, xaq u yeelashada qayb ka mid ah dakhliga, iyo kuwa kale. Tokens waxaa loo abuuray qandaraasyo "smart" ah oo ku saleysan shabakadda Ethereum ama Wave blockchain. Tokens waxaa loo aqoonsan karaa inay yihiin aalado maaliyadeed ama badeecad (ama adeegyo) uu u adeegsan karo milkiilaha aaladaha (utility), iyadoo kuxiran astaamaha cryptocurrency.
Waa maxay Waraaqda ICO?
ICO Whitepaper waa dukumiinti ay soo saartay hay'ad / shirkad soo saarta astaamo si loo helo lacag lagu maalgeliyo mashruuc gaar ah. Ma jiro nuxur ahaan iyo shuruudaha sharci ahaan lagu qeexay hal warqad cad waa inay buuxiyaan. Dukumiintiga badanaa wuxuu ka kooban yahay macluumaad ku saabsan habka loo bixinayo calaamadaha, macluumaadka ku saabsan mashruuca la hirgelin doono, iyo sidoo kale kooxda ka dambeysa mashruuca.
Sidee u shaqeeyaa Bixinta Qadaadiicda Hore (ICO)?
ICO waxay ku bilaabmaysaa nooc ka mid ah bayaanka, oo badanaa loogu yeero warqad cad oo sharraxaysa faahfaahinta mashruuca, qorshaha mashruuca, Miisaaniyadda iyo yoolalka iyo doodaha qaarkood ee ku saabsan sida lacagta qadaadiicda ama astaamaha loo qaybin doono. (Badanaa astaamo ayaa la soo siiyaa si ay u matalaan lahaanshaha mashruuc ama hay'ad madax-bannaan oo baahsan, laakiin qadaadiicda badanaa waa hanti lacageed.)
Inta badan ICOs waxay go'aamiyaan tirada calaamadaha ama lacagta birta ah ee la bixiyo kahor iibka. Maalgashadayaasha horay wax u iibsada waxaa lagu siin karaa shuruudo mudnaan leh iyaga oo bixinaya qiimo hoose halkii shillin. Laakiin qiimuhu wuu isbedbeddeli karaa, oo haddii dad badani iibsadaan, waxaad ku dambayn kartaa astaamo yar.
Qaar ka mid ah ICOs waxay leeyihiin ujeedo gaar ah oo lacag ururin ah waxayna ku sii hayn karaan sicirka qiimaha iibkooda oo dhan. Kuwa kale waxay haysaa alaabada oo waxay hagaajisaa sicirka iyadoo lagu saleynayo baahida, kordhinta inta ugu macquulsan waxaana sidoo kale jira kuwa bixiya gaarsiin firfircoon marka lacag cusub la abuuro marka qof iibsado mid.
Tiro badan oo ICOs ah ayaa si madax-bannaan loo bilaabay, waxaa maamula hay'adda soo saarta boggeeda internetka. Tani waxay dhacday maxaa yeelay dalabyo badan oo la isku halleyn karo waxaa inta badan fududeeya adeegga sarrifka ama macaamil ganacsi oo u oggolaan kara maalgashadayaasha tallaabooyin ammaan oo qaarkood oo ka dhan ah kuwa wax khiyaaneeya.
Farqiga ugu weyn ee u dhexeeya ICO iyo IPO
Bixinta bilowga ah ee dadweynaha (IPO) waa geeddi-socod la mid ah ICO oo maal-gashadeedu ku helo saamiyada lahaanshaha shirkadda. Tani waxay ka soo horjeedaa ICO, taas oo astaamaha ganacsi ee ay iibsadeen maalgeliyeyaashu ay ku dari karaan qiimo haddii ganacsigu si fiican u shaqeeyo.
Wixii ku saabsan ICOs, maalgashadayaashu waxay iibsadaan cryptocurrencies cusub iyagoo ujeedkoodu yahay inay faa'iido ka helaan markii qiimaha uu kordho. Tani waxay la mid tahay shaqsiga macaashka qaata marka saamiyada ay ka iibsadaan sarrifku kor u kaco. ICO way ka duwan tahay iibsashada saamiyada suuqa saamiyada maxaa yeelay markaad maal gashato astaamo cusub, ma wadaagi kartid lahaanshaha shirkadda.
Maxay caan ku soo ururinta ICO caan u tahay?
ICO waa nooc dijitaal ah oo dijitaal ah oo ka kooban dad badan. Waxaa si wax ku ool ah loogu adeegsaday in lagu maalgeliyo lacagaha loo yaqaan 'cryptocurrencies', oo maalmahan si aad ah loogu guuleysto isla markaana soo ururiyey lacago aad u tiro badan oo aan waligood awood u yeelan lahayn inay ku sameeyaan tirada dadka caadiga ah. Waa kuwan qaar ka mid ah tusaalooyinka mashaariicda badan ee lagu guuleysto ee ICO: Stratis, Ethereum, Iota, Viberate & Edgeless
Sidee loo hirgeliyaa ICO?
Shirkadaha lacagaha loo yaqaan "Crypto-currency" ee doonaya inay lacag ku ururiyaan iyada oo loo marayo ICO waxay u baahan yihiin inay bixiyaan macluumaad qaar, oo ay ku jiraan sharraxaadda mashruuca, ujeeddada mashruuca, shuruudaha maalgashiga, qaybta calaamadaha ay shirkaddu hayn doonto, waqtiga mashruuca ICO iyo nooca lacagta dalwaddii ee mashruucu aqbalay.
Ma u qalantaa kaqeybgalka ICO?
Waxa ugu muhiimsan waa in la fahmo inaad lacag ku maalgelinayso qof fikraddiisa, taas oo aan run ahaantii u qalmin. Dhinaca kale, aagga cryptocurrency ayaa kor u kacaya hadda. Tani waa goob rajo badan leh oo dakhli badan lagaheli karo, hadaadan rabin inaad seegto fursada horay usocodka maanta.
Maalgashiga ICO wuxuu leeyahay labadaba faa'iidooyin iyo faa'iido daro marka la barbardhigo Maalgashiga horeyba loogu taxay cryptocurrency. Marka, maalgashadayaasha xirfadlayaasha ah, ee iibsada cryptocurrency cusub ee ICO sida ugu dhaqsaha badan, waxay rajeyn karaan kor u kaca qiimaha kororka. Tusaale ahaan, kuwa maalgashaday Ethereum ICO sanadkii 2014 waxay heleen faa iido aad u badan. Muddo 42 maalmood gudahood ah, 18 milyan oo doollarka Mareykanka ah ayaa la maalgeliyey. Eter waxaa lagu iibin jiray ICO 30 senti. Xitaa liistada ugu horreysa ee sarrifka saamiyada, maalgashadayaashu way ku faraxsanaayeen boqollaal boqolkiiba koror ah qiimaha. Maanta Ethereum cryptocurrency Ether waa Qadaadiic saddexaad ee ugu xoogan suuqa oo hadda lagu kala iibsado qiyaastii $ 100.
Faa'iidooyinka Maalgashiga ICO
ICOs waxay ballan-qaadayaan fursado gaar ah oo sareeya oo ay ku guuleystaan
Qof kasta oo baaraya ICOs wuxuu wax ka baran doonaa fursadaha badan ee adeegsiga tikniyoolajiyadda 'Blockchain technology'
Maalgashadayaashu waxay saameyn ku yeeshaan naqshadeynta muuqaalka ganacsiga 'crypto-ganacsiga'
Kaqeybgalka ICOs waa cadaalad toosan
Faa'iido-darrooyinka Maalgashiga ICO
Kiisas badan oo khiyaano ah ayaa ka dhigaya kaqeybgalka ICOs khatar aad u weyn
Shandad waa ku qasab ka qeybgalka
Daraasad hore ayaa si adag lagula taliyay, waxay u baahan tahay waqti badan
Suuqa socda ee socda, waxay si gaar ah ugu adag tahay Bilaabashadu inay is aasaasaan
Waa tan sida aad ugu maalgashan karto ICO:
Si aad maalgashi ugu sameyso ICO, waa inaad ku dhex wareegtaa boggeena internetka si aad u hesho mashruucyo rajo gelin kara oo u baahan maalgelin. Markaad hesho liistada mashaariicda aad ku arki karto maalgashigaaga, waxaad u baahan tahay inaad aado degelkooda si aad u iibsato astaamaheeda.
Marka la eego in ICO lagu hayo lacagaha loo yaqaan 'cryptocurrencies', oo aan lagu hayn lacagaha Fiat, waxaa lagama maarmaan ah in lagu beddelo lacag cryptocurrency (inta badan Etherium).
U wareeji cryptocurrency mashruuca oo hel xaqiijinta kaqeybgalka
Helitaanka lacagta birta ah ee mashruuca jeebka loo yaqaan 'crypto'
Kala noqoshada lacagta qadaadiicda ah ee loo yaqaan 'crypto exchange'
Marka qiimaha ku habboon maalgashadaha la gaaro, iibinta iyo hagaajinta natiijada maaliyadeed ayaa la sameeyaa
Wejiyada Iibinta ICO
Wejiyada iibka ICO waxaa ka mid ah hannaan u kuur galaya arrimaha lacag ururinta iyo goorta hantida dijitaalka ah laga soo saaro suuqa sida xannibaado la mid ah saamiyada kuwaas oo sida ugu wanaagsan loogu yaqaan calaamadaha lagu bixiyo qiimo dhimis lagu beddeli karo liiska ico cryptocurrency list. maalgeliye hore inta lagu gudajiro wajiga bilaabida ee mashruuc gaar ah. Waxaan bixinaa liiska ico ugu sareeya. Waa kuwan saddexda waji ee iibka ICO:
Wejiga I Iib gaar ah
Wajiga labaad PRELALE
Wajiga III TAHRIIBKA
Si kastaba ha noqotee, ma jiraan wax sharciyo ah oo la sameeyay oo go'aaminaya qaab dhismeedka koritaanka kulul ee 'crypto ico'. Marka ugu horeysa, inta lagu gudajiro Wajiga I, iibka horudhaca ah iyo iibka gaarka loo leeyahay ayaa lagu dhawaaqay markaa kaliya Wajiga II wuxuu bilaabayaa inuu isweydaarsado liisaska aasaasiga ah ka dibna wuxuu yimaadaa Wajiga III halkaasoo calaamadaha ay diyaar u yihiin inay iibsadaan dadweynuhu si ay lacag badan u helaan.
Liistada ICO ee Soo socota ee ugu Fiican:
Waxaan leenahay a liiska soo socda ee ICO kaas oo dhaqso u hawl galaya. Waxaan haynaa qayb ka duwan sidii aan u muujin lahayn ICO-ga soo socda.
Liiska firfircoon ee ICOs:
Si aad u hesho liiska ugu fiican ee ICO-yada firfircoon, uma baahnid inaad hadda ku dhex marto websaydhada kala duwan. Waxaan bixinaa liiska oo had iyo jeer la cusbooneysiiyaa.
Pre-ICOs way ka jaban yihiin sidoo kale iyagana waa ikhtiyaar wanaagsan oo loogu talagalay faa'iidooyinka dhakhsaha badan. Maalmahan, Waxay caan ku yihiin maalgashadayaasha inay kasbadaan wax badan. Marka, fiiri annaga Liiska kahor-ICO maanta.
Liis garee ICO-gaaga maanta mareegahayaga oo gaadh kumanaan maalgashadayaal ah oo ka kala yimid adduunka oo dhan iyo sidoo kale, hadda waxaan bixinaa adeegga KYC ee ugu dhakhsaha badan ee ICO. Buuxi foomka xiriirkayaga maanta waxaana kugula soo xiriiri doonaa 24 saacadood ee soo socda.
Liiska Token E-mail:
Copyright © 2021 Liiska ICO ee khadka tooska ah. All Rights Reserved.